AKHRISO: Madaxweynaha gobalka Soomaali Galbeed oo ku dhawaaqay war kale oo xasaasi ah. – Puntlandtimes
AKHRISO: Madaxweynaha gobalka Soomaali Galbeed oo ku dhawaaqay war kale oo xasaasi ah.
JIGJIG(P-TIMES)- Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga wuuxu kaga hadlay dhibaatooyinkii waa weynaa ee loo geystay Shacabka Soomaali Galbeed 27-kii sanno ee lasoo dhaafay.
Madaxweynaha oo hadalkiisa ku soo beegay Sannadka cusub ee Itoobiya 2011-ka ayaa si adag uga hadlay Tacadiyadii ay geysteen nidaamkii TPLF ee Tigree-ga Itoobiya ay ka jawaabi doonaan oo ay aduunyada maqashiin doonaan.
Dadkii ku geeriyooday Halgankaas looga soo horjeeda Itoobiya ad adag ayuu sheegay in loo dhisi doono Talooyin oo la xasuusan doono.
Qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga oo ku qornaa Luuqada Ingiriiska, ayaa marka la tujumay siddan noqonaya.
“Wuxuu qalbigu nala dhiigayaa kumanaan rag iyo dumar ah uu naga dilay nidaamkii macangaga ahaa 27 kii sano ee lasoo dhaafay, waxaan u samayn doonaa xusuus intaan kuwaynay halgankaas.”
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in Qaran kasta xuso Halyeeyadiisa, tasna ay sameyn doonaan.
“Ma jiro Qaran horay u socon kara iyagoon xurmayn halyeeyadooda, tobanaan kun oo soomaali ah ayaa naftooda u huray ladagaalanka gumaysiga si dadkoodu xoriyad iyo sharaf ugu noolaadaan,”
In taladii iyo arrimihii ay u dagaalamayeen la hirgalin doono ayuu balan qaaday.
“Dhiigoodu ciyaar ma noqon doono, Mana iloobi doono, quluubtay nagala joogaan”
Aduunyada ayuu sheegay in ay codka gaarsiisan doonaan.
“Xasuuqii Bini’aadam ee wadankeena ka dhacay een horay looga hadal waa in aduunku maqlo.”
Maashaallaah mustafa cagjar hadal geesinimo leh ayaad ku hadashay horay uga sii soco.
Mustafa madax weyne waxaan kaa codsaneynaa anigoo ku hadlaya afka ama qalbiga somali badan in cabdi maxamed cumar aan addis abeba kaligii lagu xakumin iyadoo ay dibadda joogaan oramadii ka qayb gashay xasuuqii dadkii soomaaliyeed iyo tigreegii kala qayb galay jariimadii laga galay somali state.
Nooloow madax weyne
Somaali ha noolaato
Waa dadaalayaa ee ilaahay ha garab galo.
Kollay waa nin og khaladaadkii meesha ka jiray,waxna ka bedeli kara.
somali galbeed warkaa waa kii sdaa tihiin idiingale , ogadeenya may ku dhibaysaa dhulka ayaa magaciisa la yiraahdaa laakiin haddaad dhulka somalini9mo ku sheeganayso maxaa halgankiisa kuu diiday kaba daran wiilashiishii dhiigooda u hurayana soo taad tigreega u dhiibi jirtay dhulku maxaad ku sheegataa , uma dagaalantid xitaa dagaal siyaasadeed maadan samayn , nasiib darro somalida maanta waxa haysto ayaa ah in kareetada ay ka hormayeen dameerka oo dameerkii kareetada jiida lahaa in gadaasheeda taaganyahay. magacyada iyo qabyaaladda waxaa ka horeysaa inaad dhulka xoreysid haddii kale war la fadhi meesha inta oromada kuugu imanayso.
Orgino waa ku salaamay, salaan ka dib mujaahidintii ogadenya allaha u wada naxariisto, inta dhaawacana allaha caafiyo.
Magaca OGADENYA oo lagu magcaabay SOMALI GALBEED iyo magaca MAJEERTENYA oo lagu magcaabay gobolka bari iyo mudug waxaa magacyadaa bixiyay gumeysi ama isticmaar si uu cuqdad u kala gasho shacabka soomaaliyeed.
SOMALI STATE waa magac wanaagsan oo ay iska wada arkayaan somalida ku wada nool gobolkaan.
Waxaan rajeynayaa ONLF ayadaa usoo halgantay xukunka iyo doorashada haka soo qayb galaan.
Wa bilaah taw3
somalidu in ay is xaqirto ma ahee in ay is xaqsoorto laga waa. Gumeystu ma bixin magacyada kala ah Ogadeeniya iyo majeerteeniya. waa magcyadii uu wadanka gumayatuhu ugu yimid oo somaali dhanna u taqaaney.
dhulka somaaliyeed ee xabashidu haysato waa dhul balaaran oo somaali kaladuwan dagan tahay waxaa dhanka galbeedka ugu shisheeya dhulka somaaliyeed oo loo yagaano Ogadeenia . waana kan ugu balaaran. oo waxaa daga absame iyo Geri dhanka hawdka iyo dhulkii looyaqaaney Ciid waxaa daga harti iyo awrtable iyo leelkase iyo mareexaan. Dhanka koonfureed ee dhulka somaaliyeed ee etobia waxaa daga qabaa’ilo badan oo ay ka midyihiin Makane iyo Xiimay iyo Raxaweyn iyo qabaa’ilo fara badan ee soomaaliyeed. laakiin maadaama uu Ogaadeen ugu dhul balaaran yahay dhulkii waxaa loo bixiyey Ogaadeeniya. Taasu macnaheedu ma aha in Ogaadeen dhulka oo dhan leeyahay.
Laakiin Majeerteenia waxaa leh oo kali ku ah majeerteen.